Ọrụ na Dubai mkporo ndụmọdụ na ọrụ portal saịtị na UAE
Otu esi ejikọ na Top Recruiters
Best Jobs Portals ke Dubai, UAE
Ọrụ na Dubai ndụmọdụ amara na UAE
Ọrụ na Dubai expats aka, chọta ọrụ kacha mma Portals na Dubai, UAE. Ọrụ na Dubai kwabata ndụmọdụ zuru ezu. Karịsịa iji ruo n'elu ọrụ portal saịtị na UAE. Dị ka ebe ọrụ ọrụ dị na Dubai City. Egwuri egwu ọrụ dị mkpa na-arụ ọrụ na ibi na Dubai. Maka ndị na-achụ nta ego na ahụmahụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu ọtụtụ n'ime ndị ọgbọ. Na-achọ ọrụ karịa site na mba ha. Ama onye ọ bụla chọrọ ịchọta ọrụ kwesịrị itinye ya na ọrụ ọrụ ọkachamara. Naanị ajụjụ ndị Dubai dị mma maka gị?
N'akụkụ aka nke ọzọ, iji nweta ọrụ na Dubai City. Na ụgwọ ọrụ dị elu. Ikwesiri ịrụ ọrụ ike. Na iji teknụzụ dị elu maka ịchọ ọrụ. Iji maa atụ, kpọtụrụ Ndị na-ewe ndị ọrụ na Dubai. N'akụkụ dị mma, na UAE. Can ka nwere ike chọta ezigbo ọrụ nwere ezigbo okwu nke ọrụ. Ebee ka ị nwere ike ịmalite elu. Na nkà mmepe ọrụ. Na akụkụ na-adịghị mma, ị ga-achọ ịgbanye ọtụtụ ihe iji nweta nke ahụ.
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla chọrọ otu ndụmọdụ ndụmọdụ kwesịrị ekwesị banyere ịkwaga na Dubai. E nwere ọtụtụ ụzọ maka ndị na-achọ ọrụ ụwa. Ihe niile ị chọrọ ịma bụ naanị ngwaọrụ ole na ole ị nwere ike iji nweta ọrụ na Dubai. Enwere ọtụtụ ihe akaebe na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ. Na ha bụ itinye ndị ọrụ na UAE. Anyị etinyela ole na ole n'ime ndụmọdụ nke ọrụ gbasara ọrụ. I kwesiri iji ha choo oru. Ma ọ bụghị naanị na Dubai, ọ dị mkpa ịghọta na e nwekwara Abu Dhabi na ebe ndị ọzọ a ga-amalite ọrụ. Were anya n'okpuru.
Ebee ka ị ga-etinye maka ohere kachasị mma na UAE?
Ọzọ United Arab Emirates bụ otu n'ime obodo ndị kachasị amasị maka Ndị na-achọ Job. N'otu oge ahụ, Dubai bụ obodo kachasị mma iji mepụta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ewu ihe ọhụrụ na-enyekwa ndị ọrụ nchụso ụwa niile ohere karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ India, maka Philippines choro ọrụ, Pakistan na-achọ ọrụ, Saudi Arabia ọrụ na-achọ, Qatar ọrụ na-achọ na ndị ọzọ. Ya mere, ihe mbụ ị ga-echeta maka gị dị ka ndị na-achọ Job bụ ndị na-achọ ọrụ nrọ ha na Dubai, UAE. Kwesịrị ị na-achọ maka saịtị kachasị mma na saịtị UAE.
Na Emirates, e nwere ọtụtụ ohere. Otu n'ime ha bụ ọrụ Butler. Ịdị ka ọrụ nkịtị ma enwere isi na ya. Ee na United Arab Emirates. I nwere ike maa chọta ndị na-ere nri na Dubai. Nke a bụ otu n'ime ọrụ kacha mma. Ọzọkwa, na ọrụ ahụ, ịnwere ike ịnye ụgwọ ọrụ dị mma. N'aka nke ọzọ, ị kwesịrị ile anya maka ụlọ ọrụ kacha elu. Ndị otu anyị na-enye ndụmọdụ maka ya Ọrụ Careerjet Dubai. Na yana Nnukwu ebe nrụọrụ weebụ Gulf. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị. Na kwa ụbọchị na-agba ndị mmadụ ụgwọ.
Ndụmọdụ zuru ụwa ọnụ na ndepụta nke saịtị ọrụ portals
Ịdị mma nwere anya. Na n'elu ọrụ portal saịtị. Iji mee ihe iji mee ihe ezumike na UAE. Nwee ike n'akụkụ nke ọma ma chọpụta na ọ bụ eziokwu. Otu esi emesia etinye maka ọrụ na United Arab Emirates. Ma ọ bụ ọbụna maka mpaghara ọrụ niile dị na Gulf. Citylọ ọrụ Dubai City, n'aka ndị ọzọ, raara ndị ọkachamara nye ndi dinta n’abu n’ulo Dubai. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ na ngalaba a kapịrị ọnụ.
Ihe na-akpali mmasị ebe maka oru na Saudi Arabia. N'oge a obodo a na-enye ọrụ nwube, na-etinye ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mmanye. Na-eto eto na, na-ejikwa ụlọ ọrụ ọhụrụ maka ohere nlekọta. Na n'ime ụlọ ọrụ ole na ole ole na ole dị n'ebe ahụ na-enyere aka inweta ọrụ injinịa n'Alaeze Saudi Arabia.
Mepụta Profaili & buliteghachi
Tinye na saịtị ọ bụla n'okpuru ebe a
No.1 Linkedin.com kacha mma arụ ọrụ
Linkedin.com - Ihe kacha ewu ewu nbudata ihe owuwu weebụ na Middle East. Ebe a na-arụ ọrụ LinkedIn na-arụ na Dubai Internet Internet. Ma kacha mma maka maka Atụmatụ nyocha ọrụ nke Dubai. Netwọk ọkachamara LinkedIn nwere ihe karịrị 155 nde ndị na-achọ ọrụ n'ụwa nile. Ndị ọrụ a na-arụ ọrụ ugbu a na netwọk 2,500 LinkedIn.
Na mpaghara Gulf Linked bụ nnukwu ewu. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ụlọ ọrụ dị ịtụnanya na Dubai. Ihe kachasị ama, ha na-eduga na Middle East. Maka na onye ọ bụla maara na Linkedin na-arụ ọrụ n'ụwa nile. Ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ ọrụ a ga-arụ ọrụ maka ndị isi ụlọ ọrụ ise kwa ọnwa. Ọfịs na netwọk kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ na Middle East na South Africa. Na ngwa ngwa otu nde ndị otu nọ na UAE. Na-etinye maka mgbasa ozi ọhụrụ site na ndị na-akpọsa.
Gịnị mere Linkedin ji ewu ewu na GCC?
Ihe ngosi nke Linkedin na Middle East na GCC na-eto eto. N'ihi ndị ọhụrụ na-esonye kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, ndị nleta na-agafe na UAE. Ịmata na Middle East dị mma. Mgbe ahụ na-agagharị n'Ịntanet maka nyocha ọrụ. Ịchọta na ndị enyi ha nọ na Linkedin na n'ụzọ a chọtara ọrụ na UAE.
N'ihi ya, ndị ọhụrụ na-agbata ọsọ, na-agbalị ịbanye na ndị enyi ha. Ha niile nwere gburugburu 100 ruo ndị enyi ọkachamara 300. N'otu oge ahụ, ndị na-amụrụ ọhụrụ ga-aga na profaịlụ ha. Nke a na netwọk mmekọrịta na-aghọ ndị a ma ama maka ndị ọkachamara na-achọ ọrụ n'ụwa dum. Akaụntụ mebere na Linkedin ma ọ bụrụ na ịnweghị otu.
No.2 Bayt.com Ọrụ nchọta n'elu ụlọ ọrụ Dubai
N'eziokwu, Bayt.com nwere omenala kacha mma na GCC. Ị nwere ike ịchọta ezigbo ọrụ nkuzi na ezigbo ugwo na Middle East. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, Bayt bụ ebe kasị mma maka ọrụ ma chọpụta ndụ gị. N'izugbe, Chọọ ya kasị mma arụ ọrụ n'ime 500 Best Ohere Ọrụ. Iji kọwapụta Bayt natara saịtị ọrụ ọkwa maka 2017. Iji mee ihe mgbe niile akpali akpali maka ohere kachasị mma na obere ọrụ maka ụlọ ọrụ nrọ. Bayt.com kacha mma.
N'ezie ọrụ UAE abụghị ihe dị mfe iji mezuo. Nke a UAE maka otu ụlọ ọrụ ọrụ dị mma na ọ bụ ezie na a jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ na-achọta ọrụ achụmnta ego na Dubai ị nwere ike ịkekọrịta nsogbu gị n'ihu ọha N'otu oge ahụ, saịtị ndị ọrụ na UAE dị ka Bayt.com ga-ege gị ntị mgbe niile ma nyere gị aka ngwọta kachasị mma iji nyere ndị ahịa ndị ọzọ aka. chọta ọrụ UAE na WhatsApp. Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ a bụ otu n'ime ihe ọma enyemaka maka onye ọrụ.
No.3 Careerjet.ae Dubai jna-ekiri ihe ndị e ji eme njem na UAE
Careerjet Dubai bu oru na acho oru. Ma ha bụ ndị a ma ama na UAE. N'ụzọ dị iche na talent golf ndị ọzọ saịtị ọrụ na Dubai Careerjet.ae. Ọ bụ ọrụ engine engine e mere na ọ bụghị naanị iji kwụọ ndị mmadụ ụgwọ, kamakwa ime usoro ịchọta na ịgba ụgwọ dị mfe na Dubai? N'iburu nke a n'uche ịchọta ọrụ na ịntanetị, CareerJet Dubai mere ka ọ dị mfe maka Onye India na-achọ onye nwere MBA.
Isi ihe ọzọ dị na ha bụ nnukwu nhọrọ nke ọrụ. Ọ dị n'ezie na Dubai City. N'akụkụ dị mma, CareerJet nwere nchekwa data dị ukwuu maka ndepụta ọrụ na UAE. A na-emelitere ya na saịtị ndị ọzọ na mgbasa ozi ọrụ. Otu n'ime ihe kacha mma maka nchịkọta mba na mba ụwa ụlọ ọrụ maka ebe nrụọrụ weebụ na Dubai.
Kedu ihe mere CareerJet search engine na UAE?
Na-eleba anya na nke kachasị elu ọkachamara maka ịzụ ahịa ahịa saịtị ọrụ na UAE. Ihe mbụ ị ga-echeta mgbe ị na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa nke ọrụ weebụ. N'ezie ị nwere ike inyere gị aka nyocha ọrụ. O doro anya na ọrụ CareerJet Dubai na-echekwa nsogbu ahụ. Ịga na saịtị ọ bụla maka ọrụ ọrụ na Dubai. Ọrụ a na Dubai na-enye onwe ha aka ọrụ. Ulo oru nke ndi ahia na ahia na UAE dum.
Imirikiti ihe akaebe na-arụ ọrụ search engine nke Careerjet. Nke kachasị mma bụ ụlọ ọrụ ọrụ siri ike na saịtị 80. Ọzọkwa, UAE Ọrụ na-egosi ọdịiche dị iche iche nke a sụgharịrị n'asụsụ 30. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ nyocha maka ọrụ ọrụ. Tụlee ụlọ ọrụ a n'etiti ndị ọrụ kachasị mma. Na-arụsi ọrụ ike na mpaghara Gulf. O doro anya na ugboelu ọrụ bụ onye isi ihe na-eme nchọpụta.
No.4 Dubizzle.com kasị ewu ewu ọrụ portal na Dubai
Debizzle n'ihi na ọtụtụ akụkụ na-ejikọta karịa 5,635 ọrụ ọhụrụ na UAE. N'ime ahia ahia nke Middle East kwa ụbọchị. N'otu oge ahụ ọ bụrụ na ị jiri ọrụ ọrụ dị iche na Dubai. Ị ga-amalite nlele nke a. Na ebumnuche a, ha so n'ime ndị ọrụ kachasị mma. Ọzọkwa, mba dị iche iche na-eji Dubizzle saịtị nchọta ọrụ. Tupu ọbụna ịtụkwasị ọrụ na-enyefe na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Dubizzle kacha elu maka ọrụ. Ọzọkwa, ndị ọpụpụ si India agaghị enwe obi ụtọ ọ bụla na-arụ ọrụ na Dubai. Ọ dị mkpa ịghọta mmụọ nke mmụọ, ọrụ enyi ma na-enye ike ọrụ. Isi ihe ọzọ na-eme ka onyinye na-eme, ihe kpatara ya ọtụtụ ndị nwere obi ụtọ ịga rụọ ọrụ kwa ụtụtụ.
No.5 eFinancialCareers.com na Dubai
Dị ka eziokwu, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ego na Dubai. N'ezie, ị nwere ike ịbụ akụkụ nke ego isi ego ụwa Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai City. Na eziokwu na-arụ ọrụ na n'elu gosiri na ụlọ ọrụ na ugboro ugboro ndị kasị mma na ike, nghọta na NYC Stock Market Company ikwu eziokwu bụ nhọrọ kasị mma. Ihe dị mkpa iji chọpụta ndị ọkachamara na-achọ ọrụ na Business Business. Dubai bụ ebe kachasị elu maka ọrụ. Ihe ọzọ ị ga-echeta na ị nwere ike ịmalite ọrụ na-akpali akpali, ọtụtụ omenala na-arụ ọrụ na EFC nke na-enwetakwu ọdịnihu gị n'ọrụ ego.
Otu isi na-eleghara anya bụ inye ego ego iji nweta ihe ndị ọkachamara ha chọrọ. N'ebe na-adịghị mma, ị ga-arụ ọrụ na-eduga ụlọ ọrụ ego EFC. Na-enyere ha aka ịzụlite ego dị oké mkpa site na ikike na UAE. Iji gosipụta ahụmahụ gị na Dubai. Yana zigaghachi ndị nwere nkà ga-akwụ gị ụgwọ.
Ị na-achọ ọrụ ego na Dubai?
Mkpa ịghọta EFC ekweghị na ókè ihe ijuanya maka ụlọ ọrụ ego. N'ihi nke a, EFC na-eme ka ikike ịbawanye ụda nweta ma nweta ụgwọ ọrụ nkà gị ruru. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ị ga-enwe obi ụtọ nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ego. Nke ahụ na-eme onwe gị aka mgbe niile iji nye ọrụ kachasị ọrụ. N'ihu nke ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ego na Dubai. Na nzukọ a, n'ikpeazụ, ị ga-ahụ ọrụ. EFinancial Careers bụ ebe nrụọrụ weebụ.
Ndị na-enyere ọtụtụ puku ndị na-achọ ọrụ na UAE aka. Ị nwere ike ịchọta maka ụlọ ọrụ kachasị elu. Dị ka egosiri n'elu ọtụtụ nde ndị na-achụ nta achụmnta ego kwa ọnwa achọta ọrụ. Chọta ọrụ ego ha na ha. Dika edere ya ma oburu na ichoro imezu uzo nyocha gi na Dubai. Malite iji ibe a. Ọzọkwa, site n'oge ruo n'oge gaa leta ha ma chọpụta ebe ndị dị ugbu a. Na ogologo oge. Ọ ga-abụ ihe bara uru iji gbaa mbọ.
No.6 N'ezie.com maka ndị ọrụ na-achọ na Dubai
N'ezie, ọrụ Dubai na okwu bụ No.1. Na ụlọ ọrụ engine kachasị mma n'ụwa. Ohaneze na-ekwu N'ezie ọrụ UAE. Enwere ihe akaebe kacha mma maka itinye ndị na-achụ nta na India n'ọrụ maka ọrụ UAE. N'ezie, oru nyocha oru nke Dubai na-anwa ime ka ebe nyocha oru na-akwado. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-achọ otu ahịrịokwu: n'ezie ọrụ ahịa Dubai. Iji gosi na ọrụ n'ezie Dubai na-achịkwa ndị ọrụ nke ọma. Na-agbalị inweta ha n'ozuzu afọ ojuju. Ya mere, nke a bụ otu n'ime isi ihe kpatara Dubai. Ihe kpatara ị ga eji arụ ọrụ a na-arụ ọrụ ntakịrị. Na saịtị dị mma, N'ezie, a ghọtara ụwa dum.
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ na nzukọ a. Ị nwere ike ịchọta ọrụ na Qatar. Ya na Saudi Arabia na ọbụna Egypt. Ọrụ dị ebube Dubai ndebanye aha. Nwee obi ụtọ ma dị mfe. Ihe niile ị ga - eme bụ ịkwalite mmalite ahụ. Mgbe ọzọ, gbakwunye nkọwa nkeonwe gị. Ị nwere ike inweta ọrụ na Dubai. Na otu esi agagharị na nyochaa na Dubai. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike chọọ ọtụtụ ngalaba dị iche iche. n'ihi na ha nwere nnukwu akụ na ụlọ ọrụ ka na-eto eto.
Gịnị mere n'ezie ọrụ search engine?
N'ihe niile, ị nwere ike mfe ego UAE Ọrụ. Site na iji ụdị a ịchọ ọrụ Jobs. Ị nwere ike ijide n'aka na ọ ga-ebili gị ohere. Ihe mbụ ị ga-echeta. Ikwesiri igosi akwukwo / klas na profaịlụ gi. Gaa nzukọ nchịkọta ọrụ. N'ezie, nyere gị aka ịga n'ihu. Isi ihe ọzọ bụ ịchọta ohere kwesịrị ekwesị na N'ezie na Dubai. Ị ga-aga n'ime nhọrọ ọrụ kachasị mma. Dị ka ọrụ dị na Dubai. Mgbe ahụ, ọrụ ndị ahịa ga-agafe na igbe ịntanetị gị.
Na ọrụ n'ezie ụlọ ọrụ mgbasa ozi Dubai. Ga-enyere gị aka ijikwa ya kama ọ ga-esiri gị ike. O doro anya na ị ga-akọwa, N'ezie nwere otu ọchụchọ. Na ọrụ niile n'otu oge. Ụlọ ọrụ na-akwado ndị ọrụ ya na Dubai City. Na-etinyekarị ya ndị na-achụ nta achụmnta ego na Dubai. Na n'akụkụ dị mma N'ezie ọ dị mma maka ọrụ ọ ga - eji na - arụ ọrụ nwa oge. Maka otu ihe, na-ebuteghachi ihe omume gị mgbe nile maka ọrụ zuru ụwa ọnụ. Oge gị ga-adị njikere maka ndị ọrụ n'ụwa.
N'adịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ụlọ ọrụ dị na Dubai. GNcareers - Ugbu a GetThat.com na mgbakwunye na Dubai Job Search saịtị na UAE. Chọta ebe nchọta ọrụ ahụ bụ ọnụ ụzọ ntinye. Naanị kere maka ndị na-achọ ọrụ & ndị ọrụ na United Arab Emirates. Chọta ọrụ Dubai nke dị iche na nke gị. N'eziokwu, site na saịtị ebe a na-achọ ọrụ, ịnwere ike ịchọta ya ọrụ ọhụrụ. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ndị na-achụ nta n'ọrụ na UAE nyochaa oru 5,000 kwa ụbọchị. Dị ka ihe atụ nke UAE Ọrụ site na na saịtị nchọta ọrụ bụ otu n'ime ihe kacha mma. Yị nwere ike ịchọ site na nchekwa data nke ndị ọrụ na Dubai.
Na uche ka Dubai City ụlọ ọrụ mbanye mkpa. Iji dokwuo anya ihe àmà kachasị ike nke inweta. N'ụzọ dị ịtụnanya ị nwere ike jikọọ na ohere kachasị mma n'ime ahịa ahịa ahịa. Ebe ọzọ dị mkpa na ụdị ọrụ saịtị a na UAE, n'ozuzu ya, ị nwere ike ijikwa ọrụ ozi ọma na ndụmọdụ gbasara saịtị nyocha ọrụ Dubai. Iji gosiputa usoro mbughari gi na ndi oru n'ulo oru Dubai ma weghachite profaịlụ onwe gi nke oma mara Dubai Ọrụ Portal.
No.8 GulfTalent.com bbụ ebe ọrụ na Gulf
GulfTalent.com n'ezie Ebe nyocha oru nke Dubai onye ndu na nbudata ntanetị. Ihe mbụ ị ga-echeta banyere Gulf Talent Job Portal. Nke a bụ Middle East super na-ewu ewu Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. A na-egosipụtakarị ya na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ma jiri 6 nde ndị nlekọta nweta UAE. Maka nyocha oru kwa ubochi. Ihe dị mkpa iji ghọta nke a Ọfịs ọrụ Dubai ị nwere ike ịchọta ọrụ ọhụụ site n'aka ndị ọrụ niile na ọrụ. N'okwu ahụ, ha dị ala ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ọrụ Google. Ma n'enyemaka gulf na-arụ ọrụ dị ka isi iyi maka HR Ọrụ na UAE karịsịa maka Filipino na Asians.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, Gulf Talent. Ndị na-ekpo ọkụ na ebe nrụọrụ weebụ UAE. Tolite karịa 92,000 nke ndị kasị ukwuu netwọk ndị na-achọ ọrụ. Na ụlọ ọrụ nchịkọta gafee mpaghara GCC. Kemgbe 2005, ụlọ ọrụ GulfTalent. A na - agbanwe obodo Dubai na mpaghara mpaghara ntanetị. Maka Dubai na Abu Dhabi Ọrụ na ebe kachasị elu na-aga. Ohaneze na-ekwu okwu megide ọrụ ọrụ. Ụlọ ọrụ a na-ahụ maka ọrụ nwere ụzọ dị iche iche. Ma na ihu ala, ha na-ele ihe anya na mma. Ebe ọrụ a dị mma maka ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ ọbịa.
Kedu ihe mere ọrụ GulfTalent?
N'akụkụ, GulfTalent.com na-ekwu okwu n'ozuzu ya. Ọ bụ ọrụ kacha mma na Dubai ọnụ ụzọ ámá. Onye ndu nke ndi ndu ndi ozo na-enye ndi oru nduzi oru ulo oru UAE. Ruo ugbu a ka otu ìgwè ndị isi obodo Dubai City na-achịkwa. N'egbughị oge GulfTalent ọrụ saịtị. Na-arụsi ọrụ ike na ọdịbendị dị iche iche. Efe ọrụ dị iche iche na Dubai, oru maka mba GCC.
N'inye ihe ndị a, nchịkọta ụlọ ọrụ maka nkà na ụzụ, ego, ahịa na ọrụ ndị mmadụ. Ya mere na nyocha ikpeazụ nke saịtị ọrụ na Dubai, ụlọ ọrụ a ga - enyere gị aka inweta ọrụ na Dubai. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ achọ ọrụ na nleta visa. Gbal Talent maara nke ọma maka ọrụ na ndị Dubai
No9 KhaleejTimes.com maka ozi ọma na ọrụ
N'oge na-adịghị anya, akwụkwọ akụkọ mbụ nke UAE na-aghọ ọrụ ọrụ na United Arab Emirates. Khaleej Times, na nkenke, na-eweta ndị na-achụ nta n'ọrụ na UAE. Na-akwaga ha na ọkwa ọhụrụ ahụ dum. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji. Email emelitere ngwa maka ọrụ ma na-eme ka ndị na-achọ ọrụ na-emelite. Ha ga-etinye gị maka ọrụ UAE. Ebum n'uche a, Khaleej Times nyere ndị na-ege ya ntị. Na ozi ọma ọrụ. Nwelite ohuru na ọnụego ọlaedo. Nyocha na-arụ ọrụ na UAE. Nyocha gbasara nlekọta na nlekọta ọrụ. Na mmelite banyere obodo Dubai City na akụkọ ihu igwe kwa ụbọchị.
Gịnị kpatara oge Khaleej?
Na njedebe ikpeazụ na olile anya na a ga-eziga ọtụtụ ọrụ ọrụ na Dubai. Khaleej Times mere nhazi mara mma nke na-ahụ anya. Na ebum n'uche a nke ga-adị mfe ma dị mma maka ndị ọgbọ ọhụrụ na Dubai. N'iburu nke a n'uche na Dubai ugbu a nwere ike ịbụ 100% jide n'aka na ha agaghị echefu ọrụ ọ bụla dị mkpa.
Iji tinye ya ọzọ, ha abụghị ọrụ dị ka ọrụ ọrụ na UAE. Ụlọ ozi a na-ekpuchi UAE. N'ebe dị mma, ụlọ ọrụ ahụ na-ekpuchi ozi maka ọtụtụ ọrụ ga-eme maka Emiratis. N'ezie, ụfọdụ n'ime ọrụ mba nile enyere. N’agbanyeghi na acho ọrụ A ga-emelite ọrụ gị n'ógbè gị kwa ụbọchị.
No.10 MonsterGulf.com maka ọrụ na UAE
Na saịtị ndị ọzọ na Dubai. Oké Osimiri Ugwu bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma. Karịsịa na Middle East. N'otu aka ahụ, Monster.com ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche n'ahịa ahịa ụwa. N'ezie, ọbụna Google na Dubai na-akwalite ihe ijuanya na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị na UAE. Ụlọ ọrụ kpuchie na ahịa GCC nile. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu Gulf ọrụ maka onye ọ bụla. N'otu aka ahụ na ọrụ n'ezie site na ijikọta ndị na-achụ nta. Ọbụna ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ ọhụrụ gafee ụlọ ọrụ ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, enwere ahụmahụ dị mma na ọkwa nke ala. Ị nwere ike ịhụ ndị ọrụ na-eduga. Karịsịa na-arụkọ ọrụ ọnụ na Monster recruitment team. Ọ bụghị iji kọwaa nkà na ụzụ kachasị mma na United Arab Emirates. Ngwurugwu Na-atụ Ụdị Oké Osimiri "Chọta Ka Mma" System. N'otu oge ahụ nye profaịlụ dị mkpa n'ime UAE. Site n'oge ruo n'oge na-enyere India onye na-achọ ọrụ n'ọgba ahịa. Ọ dịkwa mkpa ka ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na ọrụ dị mkpa maka ndị ọrụ na Dubai.
No.11 TotalJobs.com International na UAE
Ọnụ ọgụgụ ọrụ ọ bụ ihe ọzọ ezigbo saịtị maka ọrụ maka ọrụ na Dubai. Nke a bụ otu n'ime United Kingdome na-eduzi mgbasa ozi ọrụ ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọrụ zuru ezu na-adọta ọhụrụ ndị na-achọ ọrụ site gburugburu ụwa. Kwa ụbọchị ọtụtụ nde ndị na-achọ ọrụ na-achọ ebe ndị ọhụrụ si UK na UAE. Maka nke a na ọnwa ọ bụla ezumike zuru ụwa ọnụ. Na-ele anya maka ihe karịrị 100,000 dị ndụ. Ogoro n'ọtụtụ ọnọdụ ị nwere ike ịchọta site UK ụlọ ọrụ a na-enyocha ụwa niile maka Gọọmentị ọ bụghị naanị na Middle East.
Ndi oru umuaka mmadu sitere na otutu ulo oru. Jiri ụbọchị a na saịtị a. Ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ ọbụna karịa ọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla ha ga-enweta arịrịọ. Site na mgbasa ozi a, ọrụ ọrụ zuru oke na-enweta ihe karịrị nde 2,5 nde kwa ọnwa. Idebe totaljobs.com portal. Dị ka ọ bara uru ịnwale ụlọ ọrụ na aha ọma. Maka ndị na-achọ ọrụ site na Pakistan na ndị nchịkọta dị ka atụmatụ nke ibe a. N'ezie, ọ dị mma ile anya.
Ụcha dị mma na-enyere aka ịnọgide na-adị mma. Karịsịa ka ị na-eme nchọpụta ọrụ mba ọzọ maka ọrụ. Na Total Ọrụ na Dubai, ndị ga - achọta ọrụ.
Mba 12 DubaiClassified.com
Ọrụ ntanetị ọrụ n'Ịntanet n'èzí maka ndị obodo. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime ọrụ ị na-achọ na Dubai. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa obodo dị iche iche si Dubai na Abu Dhabi nọ na Dubai Classifields.com. Ha na-enwe niile ọrụ edemede na obodo niile nke UAE.
Ndị ọhụrụ na ndị ọrụ nọ na-ebipụta mgbasa ozi ha na ọkwa nke a. Ị nwere ike ịhọrọ ọrụ oge, ọrụ oge niile. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịzụta ma ree ụfọdụ ihe na-achọghị. Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ọhụrụ na-etinye ọrụ na ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai. Site na saịtị a, ị nwere ike ịchọta ọrụ na UAE.
No.13 TotalDubai.com nkewa weebụ
Ị nwere ike ịchọta ezigbo ọrụ na Total Dubai. Ọ bụghị otú a na-ewu ewu n'Ịntanet free website. N'aka nke ọzọ, ọ bara uru ịdebanye aha gị. Ọnụ ego Dubai na-enye ọtụtụ ọrụ. Otu n'ime ha bụ ihe ga-ekwe ka ndị ọrụ ọhụrụ nụnye ọrụ ọrụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi.
Were anya, ụlọ ọrụ ahụ enweghị ọtụtụ ọrụ na-enye. Ma, ka anyị lee ya anya n'ụzọ dị mma. Ọ bụghị onye ọ bụla maara na ha nwere ọrụ ọrụ dị. Ya mere nye ha ugbua, na tinye maka ọrụ ọrụ ole na ole. Maka na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọta ọrụ na ndị ọrụ mpaghara.
No.14 NaukriGulf.com bụ ọrụ na-ewu ewu
NaukriGulf bụ otu n'ime ọrụ kacha mma maka India. Mkpokọta ahụ bụ nnukwu ewu ewu n'etiti ndị ọgbọ. Na NaurukiGulf.com ị nwere ike itinye maka ọrụ na UAE. Ọzọkwa ọrụ site na-enye ohere ohere si Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, na Oman. Na NaukriGulf na-edozi ọrụ na-achọ gafee ọrụ & ọrụ na UAE. Ha bụ enwe ọtụtụ ndị ọrụ maka ndị na-aga MBA.
Otu n'ime saịtị kachasị mma. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Gulf. Ndị ọpụpụ ọhụrụ si n'akụkụ ụwa nile Tinye na ọrụ ndị ọhụrụ na NaukruGulf. Na n'elu nke ahụ, na Naukrigulf ngwa bụ otu n'ime ihe kacha mma maka ndị na-achọ ọrụ na-eji ekwentị mkpanaaka.
Kama nke ahụ, NaurukiGulf.com bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu maka ndị na-achọ ọrụ. Ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 1 nde ndị ọrụ ekwentị ekwentị site na iji ngwa ngwa ha. Ọtụtụ n'ime nyochaa banyere ọrụ a na-ekwu na ha nwere ngwa kacha mma iji chọta ohere ọhụụ ọhụrụ.
Ihe mere ị ga-eji họrọ Naukrigulf ngwa ?. Maka na ọ bụ nke kachasị mma ọrụ na nyocha ọrụ na UAE.
No.15 Authorityjob.com maka ọrụ mpaghara na UAE
Ọrụ ọrụ maka ọrụ na Dubai. Na Sharjah na Ajman na Abu Dhabi, Rak na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, nke a weebụsaịtị na-ekpuchi ọrụ niile na 7Emirates. Ị nwere ike ịhọrọ ọrụ site na otu ma ọ bụ City. N'oge ahụ, ha na-arụ ọrụ dịka puku ise. Ị nwere ike ịhọrọ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ site n'ọtụtụ ebe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bi na Abu Dhabi, ịnwere ike ịchọta ịchọta ndị ọrụ naanị site na obodo a.
Otu n'ime ọrụ kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ mpaghara. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ndị ọzọ na mpaghara, nke a bụ ebe zuru oke maka gị. Ọ bụrụ na anyị jiri akwụkwọ ahụ tụnyere nnukwu ụlọ ọrụ. Ha adịghị emeri, n'akụkụ dị mma, ọ bụghị na ọtụtụ ndị ga-ezitere ndị ọrụ. N'iburu nke a n'uche, nke ahụ nwere ike ịbụ nwere mmasị na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ n'ebe obibi na UAE.
JobhuntGulf.com, mara ya site na ika ahụ. Ụlọ ọrụ a na-aghọkwa ihe dị mkpa maka ọrụ ndị ọzọ na-eduga na United Arab Emirates. Job-ichu nta na-arụ ọrụ na Gulf na n'elu ọtụtụ narị ọrụ dị. Na n'elu nke a na ebe nrụọrụ weebụ na-enye a zuru ezu ọrụ ịchụ nta ọrụ maka India na Pakistani. Ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-enye bụ gụnyere akwụkwọ edemede na ihe ùgwù. Ya mere ị nwere ike ịchọta ngwá ọrụ bara uru ga-enyere gị aka ala maka ọrụ na Gulf ma ọ bụ UAE.
Ebe nrụọrụ weebụ a n'ezie na-enyere gị aka maka ọrụ na ịgba chaa chaa na Dubai.
No.17 Dubaicareers.ae maka ọrụ gọọmentị
Ihe ndi oru nleta oru nke Dubai bu uzo ohuru ndi choro oru n'UAE. Nke a wepụtara site na Dubai Dubai Gọọmenti Ntọala. N'etiti mgbasa ozi mgbasa ozi, saịtị ọrụ a adịghị ewu ewu. Na nkà na ụzụ ọhụrụ nke Smart Dubai mere. Na-eduga ndị na-achọ ọrụ iji chọpụta ọnọdụ ndị metụtara ọchịchị.
Dubai Portal initiative wee nwee ike ịgbanwe Dubai. Na-ekwu okwu n'ozuzu ụwa kachasị mma ma nwee obi ụtọ n'ụwa. Nke a arụ ọrụ na-enyere aka na njikọta ndị na-achọ ọrụ. Karịsịa na ụdị dị iche iche nke specialties na edemede. N'okwu ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ọrụ ọ bụla na Dubai banyere ụlọ ọrụ gọọmentị.
A na-eme nke a na-eme nke ọma ma dị mfe iji rụọ ọrụ na ndị Dubai. N'ihi nke a, e mere ndị ọrụ gọọmenti ọhụrụ iji nye mgbasa ozi nchịkọta nke ọma. Ọzọkwa, ndị na-arụ ọrụ ga-etinye aka na ngwa ọrụ na-kpọmkwem maka ọrụ ụgbọ elu.
Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ọrụ ma ọ bụ onye na-achọ ọrụ mpaghara. Ma ị bụ enwe mmasị n'ịchọ ọrụ nrọ na UAE. Ụlọ ọrụ obodo Dubai na-agba gị ume ịdenye aha ọrụ gị na saịtị "Dubai Careers". N'ihi na ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti kachasị mma nke na-enye gị ohere ịbanye n'ụwa nke ọrụ dị ịtụnanya na-akpali akpali, ego, nchebe ọrụ na ọnọdụ ọrụ dị elu.
No.18 Edarabia.com maka ọrụ agụmakwụkwọ na Middle East
Edarabia bụ agụmakwụkwọ, ụlọ akwụkwọ na ndị na-enye ọzụzụ na UAE. Otu n'ime peeji kachasị mma metụtara Google. Ị nwere ike ịchọpụta ọrụ 500 na Edarabia. Site na weebụsaịtị a, ị nwere ike ịchọta Dubai na Abu Dhabi na ala ọzọ metụtara na UAE. Ndị ọbịa ọhụrụ nwere ike ịchọ ọtụtụ ọrụ na-eweta. Dịka ọmụmaatụ, ịmepụta, na ego na ọrụ nlekọta ọbịa na njem Dubai.
Ụlọ ọrụ Dubai City ezigbo ndụmọdụ ndụmọdụ iji weebụsaịtị a. Edarabia ọ na-enwe nkwenye dị ike. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ a nwere ọrụ niile kwadoro. N'ihi ya, i kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ọrụ ọrụ adịgboroja nke a. Lelee ha na ebe nrụọrụ weebụ ha. Na-agbalị ịnweta ọrụ kachasị mma maka ọrụ sitere n'aka Edarabia.
Site na weebụsaịtị a, ị ga - eme ọtụtụ ihe na usoro ịmara Dubai. Site na njem nleta ndu maka expats na visa enyere aka. Knowingmara nke ọma na Dubai n'ihe banyere ahụmịhe ọrụ. Ebe a na-enye ọrụ 10,000 ọrụ ọhụrụ. Ya mere, ọ bụrụ na CV gị dị mma ị ga - achọta ọrụ. Ọnụ ụzọ na-eme ka mmelite ọrụ na-adịbeghị anya.
Ya mere, nye ụlọ ahịa Dubai City ma denye aha gị. Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ edemede. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta ọrụ dị iche iche dị ka onyeisi oche. Ma ọ bụ ọbụna ahịa ahịa na mmanụ na Petroleum ohere. Iji chịkọta Ndị nnọchiteanya ụlọ ọrụ na Dubai City na-adụ ọdụ iji nweta akaụntụ na Dubai City Info portal.
No20 MEPJobGulf.com website maka ulo oru ihe owuwu
Ebe nrụọrụ weebụ n'efu n'efu. Ọrụ bara uru EMP bụ nnukwu ọnụ ụzọ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu maka ụlọ ọrụ a na-enweghị ọrụ. Na-achọ ndị mmeri ọhụrụ site na nri ha na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ. Na Middle East, ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ bụ otu n'ime azụmahịa na-etowanye ngwa ngwa. Na mpaghara na-amụba ngwa ngwa na mpaghara Gulf n'ihi na expats. Nke kachasị, ọrụ Gulf na MEP malitere rụọ ọrụ na 2014. Mgbe isi ihe dị mkpa maka MEP, ọ bụ izute ọdịiche dị na mpaghara UAE na Gulf.
Ọrụ MEP na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri abụghị naanị na-enye ohere ndị bara uru maka ndị na-achọ ọrụ. Ma na-enwe otu usoro maka ụlọ ọrụ na-ewu ihe. Ụlọ ọrụ ahụ na-ewetakwa iche maka ndị na-achụ nta ụwa. Maka nke a, ndị ọkachamara na-ewu ụlọ nwere ike ịnweta MEP. Na akụkụ adịghị mma nke ibe a. Ikwesiri ima otu esi ede a ngwa oru email.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị a zụrụ ndị ọrụ ọrụ. Onye ọkachamara ọkachamara maka ịrụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ injinia na ndị njem Dubai. N'ime naanị ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ. Ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmalite inwe uche gị. Ị ga-emekọrịta na ebe nrụọrụ weebụ Gulf ọrụ. Na jikọọ na ndị ọzọ na-achọ ọrụ ọbụna obodo Mumbai.
Mba nke Dubai Expatwoman.com
Nwa nwanyi si mba di iche iche nke umuaka na-enye ozi oma di iche iche. Ọnụ ụzọ dị na Dubai ma na-enye ozi maka nwanyị ndị ọpụpụ maka mba dị iche iche. Onye na-ahụ maka onye nwe obodo na-achịkwa ya nke ọma. Nke a bụ maka ndị na-agụ akwụkwọ na onye ọrụ. Ụlọ ọrụ na-ahazi ihe omume na nzukọ maka ndị ọrụ Dubai. N'elu nke ahụ, ha bụ enyere ndị ọbịa ọhụụ ọhụrụ aka. Na-egosikwa ha otu esi azụ ahịa CV ma ghọọ ọrụ obi ụtọ na ndị ọrụ ọlụlụ Dubai.
Ulo oru ahia nke umuaka Dubai na-eto eto site na onodu ogugu di iche iche rue ebe ozo. N'ikwu okwu n'ozuzu ha, ha bụ ịhụnanya maka ịkwado ụmụ nwanyị si mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa. Nwa nwanyi ahu nke na-aru oru na nke 15 gara aga. Ha nọ ebe a nye aka n'omume ndi ozo di na Dubai. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị na-abanye na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Ụlọ Ọrụ Britain ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ na Dubai. Otu n'ime weebụsaịtị kachasị mma na usoro usoro ngwa. N'aka nke ọzọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-enyocha ndị na-ewebata ọrụ na England. Ọzọkwa, na Reed.co.uk ị nwere ike ịchọta otutu ọkwa ọhụrụ. Ha nchekwa data ha ụlọ ọrụ na-eto eto na Dubai.
N'oge a, Reed nwere 500 oghere na Dubai. Ụlọ ọrụ anyị ejiriwo akaebe na ha nile bụ ndị iwu maka ọrụ na ịgba chaa chaa na Dubai. Nyere isi ihe ndị a, ị kwesịrị ị bulite ihe mmalite ahụ na Reed.co.uk. Ọ bara uru n'ezie. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nnukwu ụgwọ na Dubai. Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ na UAE adịghịdị ama na Reed na-ere na Dubai. Ya mere, ị ga-amata ezigbo ọrụ na Dubai enyemaka ndi mmadu ọnụ ụzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ ọzọ ị kwesịrị iji maka ọrụ ị na-achọ na UAE. Glassdoor bụ otu n'ime arụ ọrụ kachasị ngwa ngwa. Glassdoor bụ ugbu a ụlọ ọrụ na-arịwanye elu n'ime saịtị nchịkọta. a Ebe nrụọrụ weebụ Dubai nwere ọtụtụ nde ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Companylọ ọrụ ahụ etolitela na United Arab Emirates. Ihe dị ka afọ ise gara aga mgbe Ụlọ ọrụ Dubai malite inweta nyocha.
N'elu nke ahụ, ịnwere ike ime nyocha maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Ị nwere ike ịlele onye bụ CEO nke ụlọ ọrụ ọ bụla. Dịka eziokwu, ị nwere ike ịhụ ọrụ ndị ọrụ gị nwere ike ịchọta. N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịga leta akụkọ ụgwọ. Na Glassdoor, ị nwere ike ijikwa ajụjụ ọnụ. Nyochaa onye ọ bụla na-arụrụ ọrụ ma jụọ ajụjụ. Otu n'ime ọrụ kacha ewu ewu na Dubai ọrụ site ọbụna maka ndị Pakistani ọrụ na-achọ.
Ụlọ ọrụ nke abụọ maka nwanyị ahụ na Dubai. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ọkachamara n'ógbè Gulf. I kwesịrị ile anya na Hopscotch.ae n'ihi na nke a bụ otu n'ime nke kachasị mma maka nwanyị na-agafe. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bi na Middle East. Ị na-agbalị ịchọta ohere kwesịrị ekwesị.
Ihe ka ukwuu n'ime ọrụ site na Hopscotch.ea nwere ike ime gị. Ọrụ kachasị na ọrụ ndị Dubai nọ na ụlọ ọrụ a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ ọzọ. Ị ga-etinye nkọwa nkeonwe gị na portal. Jide n'aka na ị ga-eso ntuziaka na weebụsaịtị. Ihe na-akpali mmasị saịtị ọrụ maka ọtụtụ ọrụ ọbụna dika nọọsụ.
No.25 JustLanded.com maka Ọrụ na Dubai gbara ọsọ
Justlanded.com bụ ebe nrụọrụ weebụ maka ndị ọgbọ. Dị ka eziokwu, dị nnọọ ada enyere ndị mmadụ aka ná mba ọzọ. Karịsịa, ha na-arụsi ọrụ ike iji nweta ihe ọmụma bara uru banyere nlọghachi maka ndị ọpụpụ. Ụlọ ọrụ JustLanded ka e kere na 2003. Maka ihe mere ị ga-eji nyere ndị mmadụ aka ịpụ ná mba ahụ.
N'oge ugbu a, ihe karịrị nde mmadụ 170 na-ebi, ọrụ na ọmụmụ mba ọzọ. Ihe ịma aka nke nlọghari na nkwụsị na Middle East. Na-eme ka ndụ ọhụrụ na Ebe Arabic nwere ike isi ike karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. Nke a bụ ihe mere na-abịa, na-enye ozi bara uru maka ọrụ na Dubai expats blog posts.
JustLanded.com mgbe niile ịchọrọ iji nyere aka ibido nzube dị mfe karị. Kedu ebe ị si bịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịbụ nwa akwụkwọ na-arụ ọrụ mgbanwe. Ma obu a onye ọrụ ọkachamara na UAE. Ihe ọmụma na ihe onwunwe enyere na weebụsaịtị a. Ọ ga-enyere gị aka dozie mba ọzọ.
No.25 Hozpitality.com maka Ọrụ na Dubai ndị mgbawa
Na-atụ anya na ị dị njikere ịrụ ọrụ na-akpali akpali na ụlọ ọrụ nkwari akụ. Ụlọ ọrụ Nex na ndepụta anyị bụ Hospitality.com. Ụlọ ọrụ ahụ dum dị nde ụlọ nde dollar. Dị ka nke bụ eziokwu, ụlọ ahịa ile ọbịa bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ kachasị ukwuu. Ụlọ ọrụ Dubai City nwere ọtụtụ afọ enyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ na ụlọ ọrụ nkwari akụ. N'aka nke ọzọ, hozpitality.com na-eme ya karịa anyị.
Ụlọ nkwari akụ bụ otu n'ime arụ ọrụ na-eto ngwa ngwa na Middle East. Naanị ịkọwa ụwa na ọrụ niile na ndị ahịa Dubai na-enweta ya. Ị nwere ike maa a uru si ile ọbịa ọrụ na Dubai expat website na UAE. N'okwu ahụ, ịnwere ike ịchọta mkpọsa na ịrụ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa na Asia.
Ile ọbịa Ejiri ọrụ iji kwekọọ nkà na ọdịmma dị iche iche. Ma ọ dịghị ụzọ dị mfe ịmalite ịmalite ịrụ ọrụ ile ọbịa n'ụlọ ụwa. Ụlọ ahịa a na-ele ọbịa ele ọbịa bụ UAE. Na n'akụkụ ọjọọ, ị chọrọ inwe ezi ahụmahụ na ụlọ nkwari akụ iji nweta ọrụ site na ha. Ha na-enwetakwa ọrụ maka ụlọ ọrụ Qatar.
No.26 Olive.com maka ndị na-achọ ọrụ na-agụsị akwụkwọ
Ọrụ na Dubai expat gateal Olive maka ọhụrụ ndị gụsịrị akwụkwọ ọrụ na-achọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4 afọ gara aga na Olive na-amalite ịhụ nnukwu nsogbu na Middle East. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na 30% ndị ntorobịa enweghị ọrụ ndị na-achọ ọrụ nchịkọta na mpaghara MENA. Enweghi ike iji nweta ọrụ na UAE. Ụlọ ọrụ olive ahụ ejirila ọtụtụ ọrụ rụọ ọrụ iji dozie ọdịiche kachasị dị na ntanetị.
Site na nke a, nzukọ ahụ malitere ọrụ na agụmakwụkwọ na ahụmịhe. Isi ihe a na-ekwu bụ ikpughe ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eto eto na ndị isi ụlọ akwụkwọ ọhụrụ. Karịsịa nyere ha aka iru oru n'oge ọrụ ha dị na Dubai.
Site na Olive, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ maka ọrụ na ndị Dubai na-enyere aka. Dịka ọmụmaatụ, ịbanye na ọrụ afọ ofufo, ọrụ ohere oge-oge na ohere ọrụ ị gụsịrị akwụkwọ. Tinyere ọrụ na-enye site na Middle East. Òtù Olive ahụ rụrụ ọrụ na nkà na ụzụ na UAE. N'ezie ụmụ amaala nke mpaghara Mena ga-ejikọta nkà ha na ụlọ ọrụ mgbe ị na-eji Olive.com
Ndị na-achọ ọrụ nke mba ụwa maka ndị na-achọ ọrụ
Ọtụtụ puku ndị na-esite n'aka ụlọ ọrụ dị iche iche Ijikwa Ọrụ na Dubai gbara ọganihue. Nakwa site na nnukwu òtù si Qatar na Saudi Arabia na Kuwait. Ịnye ọrụ na ụlọ ọrụ a. N'aka nke ọzọ, obere azụmahịa dị na mpaghara Dubai. Obi ụtọ na-enye ohere na totaljobs.com. Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ na-aga na ụlọ ọrụ a na-aga na akaụntụ kwa ụbọchị. Na dika anyi maara na ha na-enwe ndi mmeri. N'okwu ahụ, ị ​​kwesịrị mepụta akaụntụ na-achọ ọrụ maka ọrụ na Dubai.
Maka na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị na mbụ na-eji totaljobs.com mee ka mmadụ nweta. Karịsịa ndị ọhụrụ si gburugburu ụwa. Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke nta ka ọ bụrụ nke ọ bụla ndi oru na ndi oru uzo n'uwa. Ya mere, n'ikpeazụ, ọ bụ otu n'ime ibe kachasị mma maka ọrụ na Gulf. Ya mere, ị na-achọ Ọrụ na ndụmọdụ ndị ọkachamara na Dubai. Ị ghaghị ịmara ugbu a.
Ụzọ dị iche iche ịchọta ọrụ na UAE
Ọrụ na ndị Dubai na-enyere anyị aka!
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na ọ bụghị naanị otu ụzọ ịchọta ọrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ ọzọ ị ga-esi chọta ọrụ nrọ na Dubai. Ọmụmaatụ, ị nwere ike isonyere otu ndị ọrụ WhatsApp maka ọrụ na Dubai. E nwere ọtụtụ nhọrọ. Maka ịchọta otu ụlọ ọrụ ntinye aka na-eto eto na-arịwanye elu na nke kachasị ngwa ngwa.
Can nwere ike google otu esi achọta oru na Dubai na nke mbu top gosiri ụlọ ọrụ na Dubai. N'ezie ga-abịa dị ka ihe si na ya pụta. Enwere mkpebi dị mma na nke ọjọọ. Ụlọ ọrụ Dubai City Company, n'ezie, nwere ike ịgwa gị otu esi etinye ya na Middle East. Otú ọ dị, nzube anyị bụ enyere gị aka inweta ọrụ na Emirates. Anyị nọ ebe a iji kpalie gị. Gosi gị ụzọ ị ga-esi nwee ọganihu n'ọrụ.
Ihe ọzọ bụ ịchọta ihe ndi ozo n'oru ahia n'oru ahia. Ị ga-agbaso post blog anyị. Ịmatakwu ihe ị na-agụ. Ịmata ihe ọmụma ị ga-enweta n'aka anyị. A ga-etinyekwa gị ngwa ngwa. I kwesịkwara ile anya maka ndị ọrụ were aka na Middle East. N'ụzọ dị otú a, ị nwekwara ike ịchọta ọnọdụ ohere na-adọrọ mmasị niile maka nchịkwa ụwa.
Ịga Dubai bụ ọrụ na-emenye ụjọ. Iji mee nke ahụ na smart. Gha agha gha gha emeli ozi. Otu n'ime ụzọ ndị ama ama bụ gụọ akwụkwọ ndu maka ibi na Dubai. Maka Ngosipụta 2020 ụlọ ọrụ anyị na-agbalị ịnye ozi zuru ezu maka ndị na-ere ahịa. Na nyocha ikpeazụ biko jikọta isiokwu anyị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Anyị nwere olileanya na ga - enyere ndị na - achụ nta ọrụ aka iru ọkachamara ọrụ ọrụ na WhatsApp.
N'inye ihe ndị a, nyere ndị ọzọ aka ijikọta na ndị ọrụ nchịkọta LinkedIn onye nwere ike inwe ohere!
Ọrụ na Dubai expats bụ welcome!
Ịchọrọ ịchọta Job na Dubai?
Ọrụ na Ndụmọdụ ndị ọkachamara na Dubai na ọrụ portal saịtị na UAE